စစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု Panel ကို
Surface ကနောက်ထပ် Shape နှင့် Texture ကို
18mm အထူဟာ Wall Panel ကို
30mm အထူဟာ Wall Panel ကို
3: D Injeckt စစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု Panel ကို
အမှတ်တရ Panel ကိုဆွဲထားစိုစွတ်သော
အထူးအ – Shape ရဲ့ထုတ်ကုန်များ
ကြမ်းပြင် Panel ကိုနှင့်လှေကား Panel များ
စစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု Panel များ၏အရောင်စာရင်း
Terraoctta Baguette ချောင်း
နောက်သို့ Components ရှိမှပေါ့လေ
စစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုအမှတ်တရ Tile ရဲ့
စစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု Panel များ၏စီမံကိန်းများ
download, များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ကက်တလောက်, ကျေးဇူးပြု ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
New website of LOPO Terracotta Corporation05 ဇန်နဝါရီ 2018
LOPO Clay Wall Bricks Project in China29 နိုဝင်ဘာ 2017
LOPO Terracotta Rainscreen Panels for Wall Cladding System | စစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုမျက်နှာစာ
Contact Form ကို
LOPO Terracotta Rainscreeen Panels Factory	LOPO ကော်ပိုရေးရှင်းက - The most professional manufacturer of Building Terracotta Products in Asia., marketing and service of exterior wall cladding systems - Terracotta Rainscreen Panels, ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုအမှတ်တရကွက်များစသည်တို့ကို.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, အာရုံစူးစိုက်, အရည်အသွေးပြည့်, တီထွင်ဆန်းသစ်မှု	LOPO ထက်ပိုမိုလိုက်နာသိရသည် 10 ထိုစစ်သည်ထုတ်ကုန်များအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံ. အသီးအသီး performance ကိုအညွှန်းကိန်း LOPO စစ်သည်ထုတ်ကုန်များ ဥရောပကစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်ကျော်လွန်.
အထူးပြုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစကားစုများ	- 80,000 စတုရန်းမီတာကိုပွင့်လင်း stockyard
- 150,000 semi-ထုတ်ကုန်များအတွက်အိမ်တွင်း repository ကိုတန်ချိန်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်
- အီတလီ BONGIOUNNI ထံမှမှိုစက်တွေ
- 80 ငါးခု layer ကိုခြောက်သွေ့မီတာအထိ
- 260 အတူမီတာအတုံးဖို 428 ပစ်ခတ်ယူနစ်
- automatic ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အစွန်းကြိတ်စက်ကိရိယာများ
Lopo ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစီမံကိန်းများကို	- ကိုရီးယားတွင် Shingu တက္ကသိုလ်က
- Zibo အတွက် Huaguang ကြွေ Company မှ
- ပီကင်း၌ Vanke အရောင်း Center က
- ကိုရီးယား Obelisk ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အဆောက်အအုံ
တရုတ်နိုင်ငံ LOPO အဓိကအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့, အပြင်မြို့ရိုးအမျက်နှာစာစနစ်များစျေးကွက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့……ပိုမိုဖတျရှု→
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်များရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုအမှတ်တရ Panel ကိုဖြစ်ကြသည်, စစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု Louver & ချောင်းကို, ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုအမှတ်တရ Tile နှင့်ကြမ်းပြင်အုတ်စသည်တို့. ကျနော်တို့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျောက်ခေတ်လည်းထောက်ပံ့ပေး.ပိုမိုဖတျရှု→
1st စက်ရုံထဲမှာသုံးယောက်ကထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, 2nd စက်ရုံတွင်နှင့် 3rd စက်ရုံထဲမှာနှစ်ခုကိုအထူးပြုထုတ်လုပ်မှုကိုလိုင်းများယဉ်ကျေးမှုကျောက်ပြားနှစ်ဘဏ်ဍာ.ပိုမိုဖတျရှု→
ပြင်ပရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုဝတ်အမှတ်တရ Panel များ
material: 100% သဘာဝအလျောက်ကိုရွှံ့
EC အ, ISO9001:2008
ကုလားကာတထည်အမှတ်တရရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုမျက်နှာစာ Panel ကို
usage: က Wall မျက်နှာစာ Decoration
ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု Louver နှင့် Baguette
တရုတ်ထံမှအကောင်းဆုံးရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု sunscreen ရွှံ့စေး Louver ပေးသွင်း
ငါ LOPO နှင့် LEIYUAN နဲ့ငါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြိုက်, ငါတို့သည်အချို့သောပြဿနာများအမှတ်မထင်ပေမယ့်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေ ပေး. အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်မရှင်းပြ, ငါမျှော်လင့်ထားတာထက်ငါ့ကိုအများကြီးနဲ့ပိုပြီးကူညီ. အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့သာထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ပိုင်းရောင်းချခြင်းဝန်ဆောင်မှု, ထိုကဲ့သို့သောနည်းဥပဒေအဖြစ်. သူတို့ဟာအလွန်ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြသည်.ရော်ဂျာ au-Yeung, အထွေထွေမန်နေဂျာ Mastrad လုပ် SA.
အဆိုပါရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု panel ကိုရည်မှတ်အရေးကွီးပါ element တွေ527 ဇန်နဝါရီ 2014
Terracott Panel ကို
Links:စစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု Panel ကို Newstar Stone